China ukuqina okuphezulu kokuqina kwesinyithi esinganyangekiyo sokuhombisa ngaphandle kunye neFektri | Igolide yoqalo
I-REBO® ibhodi yokuhombisa uqalo iyaqinisekiswa ngokuzinza kweCandelo 1 (ixesha elide) kwaye isebenzise iCandelo 4 (ngomhlaba kunye / okanye ngamanzi amatsha). Inempawu ezifanayo nomthi onzima. Ukuqaqamba kwayo kwe-brinell kuphezulu nangaphezulu kweenkuni. Amacala anemigca enza ufakelo ngokulula ngakumbi, kunye neziqeshana zentsimbi engenasici.
I-REBO® ibhodi yokumba uqalo izinzile kakhulu emva konyango lwe-thermo oludityaniswe nemitya yemigca yoqalo. Unyango olukhethekileyo lobushushu kunye nenkqubo yokucinezela yenza ukuba ibhodi ibe lolona phawu luzinzileyo, oluzinzileyo kwizimo ezahlukeneyo. Nokuba sele kudlule iminyaka emininzi, iibhodi zoqalo zihlala zilungile, zishiya iibhodi zingwevu ngokwemvelo, imbonakalo ihlala izinzile. Ibhodi yoqalo ye-REBO® ilunge kakhulu kwizicelo zangaphandle, kwaye isetyenziswa ngokuthe gabalala, ukutyibilika ngaphandle, ithala, ipatio, ibhalkhoni, iprojekthi kamasipala, njl.
Ibhodi yokuhombisa i-bamboo iqinisekisiwe ngokuzinza kweCandelo 1 (ixesha elide) kwaye isebenzise iCandelo 4 (ngomhlaba kunye / okanye ngamanzi amatsha). Inempawu ezifanayo nomthi onzima. Ukuqaqamba kwayo kwe-brinell kuphezulu nangaphezulu kweenkuni. Amacala anemigca enza ufakelo ngokulula ngakumbi, kunye neziqeshana zentsimbi engenasici. Iziqeshana zibekwe kwimigca yamacala kwaye zijijelwe kwii-joists, ke iibhodi zizinzile. Ngale ndlela iziqwengana azibonakali kwaye zibonisa ukujonga okuhle. Umphezulu uyilo lweprofayile yamaza amakhulu kwaye intloko inokuba tyaba okanye inkqubo yeT & G.
I-18700N / mm²
Egqithileyo Umbala omnyama akukho deformation yokukhangela bamboo
Okulandelayo: Ufakelo Easy umtya ephothiweyo bamboo yangaphandle nokwadala
Uqalo lweCarbonized Decking
I-Bamboo Decking yangaphandle
Uqalo oluqinileyo lwe-Bamboo
Uqalo lwangaphandle lwe-Bamboo
I-Bamboo yangaphandle yeThayile yokuHamba
Uqalo lwemithi yoqalo
Ubunjineli boMqolo obuCwangcisiweyo
Ubunzima be Bamboo
Moso Bamboo Ukuhombisa
Ukulungiswa kwakhona kweBamboo
Umtya olukiweyo Bamboo Decking